Kucherechedza nekudzivirira Bots neSemalt
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha izvo zvinoda kutarisa pa internet ndekuchengeteka kwako uye kuchengeteka. Nemhaka yehuwandu hwekuchengetedzeka kwekuchengetedza, zvakadai sekunetseka kwaJohn pamusoro pehurumende-inotsigirwa kushandiswa kwemusangano, nyaya dzeGCHQ neNSA, uyewo mamiriro ekuchengetedzwa kwehurumende, tinoda kutora kuchengeteka zvakanyanya. Zvakakosha kuti tinotarisira uye kuronga zvinhu zvakanaka panguva yakakodzera kuti tive nechokwadi chekuchengeteka kwepakombiyuta. Hatifaniri kukanganwa kuti tinorarama munyika umo zvinhu zvakasununguka kushandiswa uye zvinogona kuvhiringidzwa mumasekondi - net hosting argentina. Mabasa ane utsinye ave chinhu chinokosha chehupenyu hwedu, uye isu tinofanira kufunga nezvekudzivirira kwedu kubva kune simba rekunze. Pano, Ross Barber, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, achakuudza nezvekuona nekuvhara mabhodhi akaipa.
Chii chakaipa Bots?
Kune marudzi maviri akasiyana emabhoti: bots bots uye bad bots. Hazvingave zvisina kunaka kutaura kuti mabhodhi akanaka haakuvadzi webhusaiti yako, asi mabhii akaipa anogadzirisa matambudziko. Zvimwe zvezvibatsiro zvebhuku ndezvokuti vanovandudza webhusaiti yepamusoro mu injini yekutsvaga s, kusanganisira Google, Yahoo, uye Bing..Uyezve, vanotipa mabasa anobatsira sezvo vachiita kuti zvatinoda zviwanike paIndaneti kune vanhu vakawanda zvichibva mumashoko ekunyanya uye kutsvaga mhinduro. Zvisinei, mab bots akaipa anogona kukuvadza webhusaiti yako zvikuru. Iyo inoshandiswa nenzira dzakasiyana-siyana, uye vanoseka zvikafu zvemashoko kuitira ruzivo runogona kushandiswa nevakwikwidzi vako. Uyezve, iyo yakaipa bots inokonzera kukanganisa-kwe-kushungurudzwa kwebasa uye inogona kuba kana kubvumira webhu yako yehupenyu, ichigadzira makopi ayo paIndaneti. Inflating search engine traffic ndiyo yose inokonzerwa neipi yakaipa, inoita uye inokanganisa maitiro ewebsite yako. Bhuku rakaipa rinogona kuwedzera yako webhusaiti yekutengesa , asi kuenderera mberi uye kuwedzera kwekuwedzera kunowedzerawo. Pasinei nemhando dzebhoti, unofanira kubvisa zvose zviri zviviri kuti uderedze njodzi dzako dzekuparadzwa paInternet.
Ungazviziva Sei Uzvidzivise?
Unogona kuziva nekudzivirira zvose zvakanaka nezvakaipa kuburikidza nekuisa mapurani anoshanda, zvishandiso pamwe nekuwedzera. Iwe unofanirwa kuvimba nekugadzirisa nekugadzirisa vatengesi uye kutsvaga nzira dzakagadzirisa dzekudzibvisa. Iwe usati waita chero chinhu, iwe unofanirwa kutanga sarudzo kuti uone kana bot iri yakanaka kana yakaipa uye kuti ingadzivirira sei mumaminitsi. Mushumo weCMSWire unoratidza kuti zvinopfuura makumi manomwe zvezana zvayo zvinogona kubviswa nekudzivirira nzira dzakadai sokufambisa kero dze IP uye kurwiswa kwepasi.
Imwe yenzira dzakaoma dzekubvisa mabhoti ndeyokudzivirira maIndaneti emaBot ose, angave akanaka kana akaipa. Iwe unofanirwa kuchengeta rudzi rwebhokisi usati waita chero chiito. Shandisa web server mazano kuitira kuti ivhare. Iwe unogona kubvisa mazita akawanda eI IP sezvaunoda, zvichienderana nekuona kwako uye kuongorora. Iva nechokwadi chekuti hausi kudzivirira maIndaneti evanhu nokuti izvi zvinogona kuparadza mukurumbira wewebsite yako paIndaneti.